Hoos u dhaca Heerka Shaqo la'aanta ayaa lagu marin doonaa dib-u-habayn - RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulHoos udhaca Sicirka Shaqo La'aanta Ayaa Noqon Doonta Dib U Habayn
16 / 11 / 2019 34 Istanbul, GUUD, Gobolka Marmara, Warqad Hordhac ah, TURKEY
Hoos udhaca heerka shaqo la'aantu waxay noqon doontaa dib u habeyn
Young Ganacsatada Association of Turkey (TUGIAD) Guddoomiyaha Anil Alirıza Şohoğl helay sharaxaad ka mid ah tirooyinka shaaca TSI.
Sida laga soo xigtay Turkstat ee Turkey iyo in ka badan 15 2019 sano jir ee tirada shaqo la'aanta inta lagu guda jiro bisha August marka la barbar dhigo isla muddadaas sannadkii la soo dhaafay, koror of 980 kun oo qof ahayd 4 650 million kun oo qof. Isagoo ka hadlaya mowduuca, Madaxweynaha TÜGİAD Şohoğlu wuxuu yiri: rate Heerka shaqo la'aanta ayaa lagu dhawaaqay 14.0 bishii Agoosto. Heerka shaqo la'aantu waxay ahayd 13.9 bishii Luulyo iyo 2018 bishii Agoosto ee sanadkii hore. Heerka shaqo la’aanta beeraha ayaa sidoo kale ahayd boqolleyda 11.1. Dhibaatada ugu weyni waxay ka dhacday shaqo la’aanta dhalinyarada. Heerka shaqo la aanta ee dadka dhalinyarada ah (16.7-15 da'da) wuxuu noqday boqolkiiba 24 wuxuuna gaadhay heer rikoor ah boqolkiiba dhibcaha boqolkiiba 6.6 wuxuu kordhay marka la barbar dhigo isla xilligii sanadkii hore. Intaa kadib, ahmiyada ugu saraysa; kororka maalgashiga leh dib-u-habeeynta qaabdhismeedka iyo hirgelinta hannaan koritaan waara. ”
Isagoo carabka ku adkeeyay in heerarka shaqo la'aantu ay tahay in loo maareeyo hab la xakameynayo, Şohoğlu wuxuu sii raaciyay: waxaan rumeysanahay in culeyska saaran loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha in la yareeyo. Hirgelinta deg degga ah ee xirmada shaqo bixinta ayaa fududeyn doonta shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha labadaba, sidaa darteed, cadaadiska shaqo la'aanta ee bulshada ayaa yareyn doonta. Wicitaan kale oo loogu talagalay dhalinyarada ganacsatada ah. Waa inaan raacno siyaasadaha si joogto ah u soo saarno giraangiraha wax soo saarka oo aan kordhinno sicirkeenna dhoofinta. Tani waxay u ogolaaneysaa labada yareynta in heerka shaqo la'aanta iyo dareen dhaqaale, waxay xaqiijin doontaa dhaqashada dhaqaalaha Turkiga.
Başarı Guusha sicir bararka waa in lagu gaadhaa shaqaalaynta "
"Data waxaa lagu tilmaamay in dalalka OECD, heerka celceliska shaqo la'aanta ahaa% Geeri heerka shaqo la'aanta 5.2 kala duwan ee 13% 14-% of Turkey weli qaali ah." Waxa uu ka hadlay Şohoğl ku daray soo socda in la yidhaahdo: "4 ugu sarreeya ee dalalka OECD. Iyada oo heerka shaqo la'aanta ee guusha ugu danbeeyay Turkey ayaa gaaray in sicir bararka waa in sidoo kale horay u riday tirooyinka shaqada. "
Ogeysiiska Qandaraaska: Waxaa jiri doona nidaamka gudbinta microprocessor ee nooca laydhadhka DE 24000
Hoos u dhaca Heerka Shaqo la'aanta
Young Ganacsatada Association of Turkey
Tirada shaqo la’aanta TurkStat